पेट्रोलियम पदार्थमा फेरी बढ्यो मुल्य ! — Motivate News
Posted on May 17, 2018 by Ghanshyam Shrestha
काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले इन्धनको मुल्य वढाएको छ । निगम संचालक समितिको आज साँझ बसेको बैठकले पेट्रोल, डिजेल, र मट्टितेलमामा दुई /दुई रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो । अब पेट्रोल ११० तथा मट्टितेल र डिजेलको समान ९२ रुपयाँ प्रतिलिटर पर्नेछ ।
हजाएको साढे ३३ किलो सुनमा एम.के मामाको लगानी, लुटपाटमा राप्रपा नेताको संलग्नता
काठमाडौं – साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धान जारी छ । अनुसन्धानको क्रममा गायब भएको भनिएको साढे ३३ केजी सुनमा एम.के. मामा भनिने मोहनकुमार अग्रवालको लगानी भएको पाइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका ३ घर भइ हाल काठमाडौंको अनामनगर बस्दै आएका अग्रवाल...